စာမတတ်တာ အပြစ်လား – HI Burma
Home	ဆောင်းပါး	စာမတတ်တာ အပြစ်လား
သူမပြန်လာတော့ မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက သူမရင်ကို တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ သမီးလေးရဲ့ အနာဂတ်ကိုလည်း တွေးပြီး ရင်လေးမိသွားတယ်။ ဘာကြောင့် အဖေအရင်းဖြစ်သူက အဲလိုလုပ်ရတာလဲ သူမနားမလည်နိုင်ဘူး။ “သူက ကလေးတအားငိုလို့ ထမကြည့်နိုင်လို့ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ တန်ဆာကိုပေးကိုင်ထားတာ သမီးလေးကကိုင်ပြီး ဆော့ပြီးငိုတိတ်သွားတာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့အဲလိုလုပ်ရတာလဲလို့မေးတော့ ကလေးတအားငိုနေလို့ ငါလည်းမထနိုင်တာနဲ့ အဲလိုပဲပေးကိုင်လိုက်တာတဲ့” လို့ မနှင်းဖြူက ပြောပြပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မနှင်းဖြူဟာ ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း အမြဲတမ်းဘုရားဆုတောင်းပြီး သူမလိုချင်တဲ့ ဆုတစ်ဆုကို တောင်းနေမိတယ်။ သူငယ်တန်းသာ တက်ခဲ့ရတဲ့ သူမမှာ မိသားစုစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အပြင် မိခင်က နောက်အိမ်ထောင်ပြုသဖြင့် လွိုင်ကော်မြို့မှ မန္တလေးသို့ မိခင်နှင့်အတူ ဖခင်ကိုထားပြီး ညီအစ်မသုံးဦးစလုံး လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။
မနှင်းဖြူအရွယ်ရောက်လာတော့ သူဌေးတွေရဲ့အိမ်မှာ အိမ်ဖော်အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့တယ်။ သူမဟာ ဆင်းရဲစွာနဲ့နေထိုင်လာခဲ့ရပေမဲ့ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားသူ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားတရားကြည်ညို ကိုင်းရှိုင်းတတ်ပြီး စာရိတ္တကောင်းသောသူမကို အိမ်ရှင်များက သဘောကျနှစ်သက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမဟာ ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ်နဲ့ နေချင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ် ဒါကြောင့် အိမ်ရှင်များ တားတဲ့ကြားက အလုပ်ထွက်ပြီး အထည်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကို ငါးနှစ်တာလောက် လုပ်ခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ သူမထက် အသက်(၁၀)နှစ်ကျော်ကွာတဲ့ စစ်ထွက်အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ချိန်မှာ သူမရဲ့အတွေးထဲမှာတော့ သာယာတဲ့ မိသားစုဘဝတစ်ခုထူထောင်ပြီး ဖခင်အိုကို တတ်အားသလောက် လုပ်ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ သူမတို့လင်မယားဟာ ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့ကို ပြောင်းရွေ့နေထိုင်လာခဲ့ကြတယ်။ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ လက်သမားအလုပ်နဲ့ သူမကို ရှာကျွေးတယ်။ အခုတော့ သုံးဘီးကားမောင်းပြီး ရှာကျွေးပါတယ်။ လွိုင်ကော်မြို့လို နယ်မြို့လေးမှာ ကုန်ခြောက်၊ ကုန်စိုတွေ လူတွေက ခရီးအနည်းငယ်ဝေးရင် သုံးဘီးကားတွေကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြလို့ သုံးဘီးသမားတွေဟာ တနေ့တာဝင်ငွေ ကောင်းကြပါတယ်။
နှစ်အနည်းငယ်ကျလာတာနဲ့အမျှ သူမရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာလေးအတိုင်းလည်း ဖြစ်မလာပါဘူး။ မနှင်းဖြူရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ ဖောက်ပြန်လာပါတယ်။ မနှင်းဖြူကတော့ “တစ်ခါတစ်ခါပြန်စဉ်းစားမိတယ် အော်…ငါ သူများအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရင်တောင် စိတ်ချမ်းသာဦးမယ်လို့ တွေးမိတယ် အိမ်ထောင်ပြုမှ တအားစိတ်ဆင်းရဲရတယ် ကိုယ်ကတော့ ပျော်ရွှင်မယ်လို့ ထင်ထားတာ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရင် ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ်နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရမယ်လို့ ထင်ထားတာ တစ်ခါခါ ကွဲပြီးတော့မှ သူများအိမ်မှာ အိမ်ဖော်လုပ်ပြီး နေလိုက်ချင်တယ်” ….လို့ စဉ်းစားပြီး ထွက်သွားလိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့.. သူမရဲ့ ရင်သွေးတွေအတွက် သူမဆက်ပြီး ပေါင်းနေရတယ်။
“ကလေးရတော့လည်း ကလေးရလို့ သူဖောက်ပြန်တာ ကျမသိတယ် အဲတော့ သူ့ကို ကျမပြောပြတယ် နင်တို့ဘာပဲလုပ်လုပ် ငါသိတယ် အဲလိုမျိုးမလုပ်နဲ့ကျမပြောတာပေါ့ သူက ငါဘာလုပ်လုပ်ပေါ့ မင်းသိတော့ကော မင်းဘာလုပ်ချင်တုန်း” ယောကျာ်းကပြောတော့ သူမက “ဖောက်ပြန်တာတွေ ဟိုတွဲဒီတွဲလုပ်တာဆိုရင် ငါမပေါင်းချင်ဘူး ရွံတယ်” လို့ပြန်ပြောတယ်။ ပြီးတော့ သူမကို အိမ်ပေါ်ကနေ မောင်းချတယ်။ သူမက မောင်းချခံရလောက်အောင် အပြစ်ကျူးလွန်သူမဟုတ်ပါဘူး၊ လမ်းဘေးက သေလေဂျဘေလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ သူမက မိကောင်းဖခင်သားသမီးတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ သူမ အိမ်ပေါ်ကမဆင်းနိုင်ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမရဲ့ ကလေးမျက်နှာတွေကြောင့်ပဲပေါ့။
သူမဟာ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် သည်းညည်းခံပြီး နေလာခဲ့ရသည်မှာ ကလေးတွေ ကြီးလာတဲ့အထိပါပဲ။ သို့ပေမဲ့ သူမရဲ့ ယောကျ်ားအကျင့်တွေ ပြင်မလားဆိုတဲ့ မျော်လင့်ချက်နဲ့ပါ။ ကလေးနှစ်ယောက်ရတဲ့အထိ သူ့အကျင့်တွေ မပြင်ဘူး။
“ယောက်ျားလေးမွေးတော့လည်း ကလေးအပေါ်တော့ သူချစ်တယ် ဒါပေမဲ့ နောက်မိန်းကလေးမွေးတော့ သူ့အကျင့်တွေပြင်မလားနဲ့ မပြင်တော့ အခုကျမတအားစဉ်းစားတယ် ကွဲမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ မကွဲဘဲနေရင် ဒီထက်ပိုဆိုးလာမယ် ကျမစကားလည်းနားမထောင်ဘူး အမျိုးသားလည်း ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူး သူလုပ်တာသူအမှန်ပေါ့နော် အဲလိုမျိုးတွေ သူပြောတာအကောင်းသူလုပ်တာအမှန် တွေပဲ”
သူမအိမ်ထောင်စကျတာ အသက်၂၄ နှစ်ထဲမှာပါ။ အိမ်ထောင်ကျတော့ ကိုယ့်အဖေကို လုပ်ကျွေးမယ်ဆိုပြီး လွိုင်ကော်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ ကိုယ့်အဖေကို ကောင်းကောင်းလုပ်ကျွေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ယောကျာ်းက သူမထက်အသက်ကြီးပေမဲ့ စိတ်သဘောထားသေးသိမ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမဖြေသာပြီးတွေးပေးပါတယ်။
“အော်…….သူ့စိတ်ကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းထားတယ် သူပြောတဲ့စကားမှာ အပြင်မှာချိုချိုသာသာပြောပေမဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တည့်အောင်ပြောမယ်ဆိုတာမရှိဘူး”။ အဲဒီတော့ သူမအဖေကို ခေါ်ထားရင်လည်း စိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိတယ်။
သူမတွေးရင်း မျက်ရည်တွေ စီးကျလာတယ်။ အသံတွေလည်း နစ်ဝင်ကုန်ပြီ။ “ကိုယ့်အမျိုးအိမ်သွားပြီးပြန်လာရင်လည်း စကားအကောင်းမပြောဘူး၊ ရန်စကားချည်းပဲပြောတာ ကြာလာတော့ တွေးရင်းတွေးရင်း စိတ်မချမ်းသာလာဘူး သိလား ကိုယ့်အမျိုးအိမ်သွားတိုင်း အဖိုးအဖွားအိမ်သွားတိုင်း သူက ရန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားမိတယ် နောက်သွားရင် သူ့ကိုအသိမပေးပဲသွားတာမျိုး သက်ရောက်သွားတာပေါ့” လို့ သူမကပြောပါတယ်။
သူမရဲ့ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ထားတဲ့ တစ်ရှုးတွေဟာလည်း သူမရဲ့ လက်ထဲမှာ ပြည့်နှက်နေပါပြီ။ အဲဒီတစ်ရှုးတွေလို သူမရဲ့ နာကျင်မှုတွေလည်း သူမရင်ထဲမှာ အပြည့်ပါပဲ။
“သူ့ရဲ့ အဲလိုစိတ်ဓာတ်တွေဟာ စာတတ်ပြီး ဘယ်လောက်အောက်တန်းကျလဲဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း သိလာရတယ်”
သူမရင်ထဲနာကျင်လွန်းလို့ ခဏတာဆွံ့အသွားခဲ့တယ်။ ပြီးမှ စီးကျဆဲ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ရင်းနဲ့ အားတင်းပြီး “ကျမတောင်စာမတတ်ဘဲနဲ့နော် သူများအိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှ အိမ်ဖော်ဘဝနဲ့ပေါ့ နေခဲ့ရပြီးတော့မှ သူများတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုရှိလဲ အိမ်ရှင်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ် ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ ကိုယ်ကစာမတတ်ပေမဲ့ သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ကိုယ်ကအတုခိုးပြီးတော့မှ နေခဲ့ရတာ အခုအိမ်ထောင်ကျလည်း ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကို ဘယ်တော့မှ အောက်တန်းကျအောင် မနေဘူး မနည်းစိတ်ဓာတ်ကို မြင့်ထားတာ ကျမဆိုဘုရားတရားနဲ့နေတာ နေလွန်းတော့ အိမ်ရှင်ကတအားသဘောကျတာ ကျမထွက်မယ်ဆိုရင် မထွက်ပါနဲ့မထွက်ပါနဲ့ တောင်းပန်တယ်”…ဟု ဆိုပြီး ဆူညံသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူမရဲ့ ရှိုက်သံက လွှမ်းသွားပါတယ်။
မစဲသောရှိုက်သံနဲ့ သူမက “အော်…..ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာမှမသိခဲ့တာ အမေတွေက သူများအိမ်မှာထားလို့ နေခဲ့ရာတာ အသက်အရွယ်ရလာတော့ မနေချင်တော့ဘူးလေ ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ်နဲ့ နေချင်တယ် စီးပွားရေးရှာမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အပြင်ကိုရောက်လာတယ် ဒီမှာရောက်တော့ အိမ်ထောင်ကျလည်း ကျမမှာ အဆင်မပြေဘူး ဟိုမှာငှားနေ ဒီမှာငှားနေ နောက်မှ ပိုက်ဆံလေးချွေတာစား စုဆောင်းပြီးတော့မှ ကိုယ့်ဝိုင်းကိုယ့်ခြံနဲ့ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း အဲလိုပဲ အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော် သူက ရှာကျွေးတယ်” လို့ ဆက်ပြီး ပြောပြပါတယ်။
သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ညားကာစတုန်းကဆိုရင် သွားအတူ၊ လာအတူနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်ကြပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ စကားပြောတာတွေကအစ အများကြီးကွာခြားသွားတယ်။ “အမျိုးအိမ်တွေသွားရင် ချုပ်ခြယ်သလိုလို ပြီးရင် ဝတ်တာစားတာကအစ လိုက်ပြောတာ ဝတ်တာစားတာက ကျမမြို့မှာနေလာတာ ဝတ်တတ်စားတတ်ပါတယ် အဲဒါကို ပုံတုံးကြီးနေတယ် ဘယ်လိုနေတယ် ဘယ်လိုထိုင်တယ် ကျမအလှပြင်မယ်ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လိုမှမသင့်တော်ဘူး အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ ဆတ်ကော့လတ်ကော့နေတယ်ဆိုတာ အပြောကို မခံချင်ဘူး ကျမအလှမပြင်ဘဲနေခဲ့တယ် အဲဒါကိုလည်း အမျိုးမျိုး အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာတယ်” လို့ ငိုကြွေးပြီး သူမက ပြောပြတယ်။
ပြီးတော့ သူမကို အပြင်အလုပ်မလုပ်ခိုင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူမတခြားယောက်ျားတွေနဲ့ တွေ့ရင် လိုက်သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ ဆိုပြီး မလုပ်ခိုင်းဘူး။
“ဒါပေမဲ့ သူကအပြင်မှာ ပွေမယ်ရှုပ်မယ် ကျမကိုမမြင်စေချင်ဘူး အဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကျမကိုထားတာ အရင်ကသူ လက်သမားလုပ်တယ် အခုနောက်ပိုင်းသူ သုံးဘီးမောင်းတယ်”
သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ နိုင်ငံခြားအပြာဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီး သူမကို ထိုဇာတ်ကားထဲကအတိုင်း လုပ်ခိုင်းတဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။
“သူက ဇာတ်ကားတွေကို နိုင်ငံခြားကားကလာတဲ့ မဖွယ်မရာ ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်တာပေါ့နော် တီဗွီမှာထိုးပြပြီးတော့ တွေ့လားတဲ့ အဲလိုမျိုးတွေ မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေကို လုပ်ပေးတာ သူကလည်း လုပ်စေချင်တာပေါ့ အဲလိုမျိုး ပြောတော့ ကျမကလည်း ဘာဖြစ်လို့ အဲလိုလုပ်ခိုင်းတာလဲ မေးတော့ ယောကျာ်းတွေကျေနပ်အောင်လို့ လုပ်ပေးတာတဲ့”
အဲဒီလိုလုပ်ခိုင်းတာကို သူမက ငြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် “မင်းတို့က အဲလိုတွေ ယောကျ်ားဖြစ်စေချင်တာတွေ မလုပ်ပေးတော့ ယောက်ျားတွေက အပြင်မှာ ဖာသည်မတွေနဲ့ သွားနေသွားလုပ်တာပေါ့” လို့ သူမကို ပြောတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို တွေးမိတိုင်း ရှက်မိတယ်။ သူမကတော့ ရင်နင့်စွာဖြင့် အတွေးတွေထဲမှာလည်း “အော်….ငါကမှ သူ့ကိုအဲလိုလုပ်မပေးဘူးဆိုရင် သူကအပြင်မှာသွားပြီးတော့ လုပ်မှာပဲပေါ့” လို့ တွေးမိသွားတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူမလည်း တစ်ခါတစ်လေတော့ စိတ်တိုင်းကျအောင် လုပ်ပေးမိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူမယောက်ျားဟာ တခါတလေ လိုတာထက်ပိုပြီး သူမ သည်းမခံနိုင်လောက်တဲ့ ပုံမှန်ဆက်ဆံမှုမဟုတ်တဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူတွေ လုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက် သူမ ငြင်းဆန်တာမျိုးရှိပါတယ်။
ယောကျ်ားစိတ်တိုင်းကျ မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ မိန်းမကိုစိတ်ဆိုးသလိုလို စိတ်ကောက်သလိုလိုနဲ့ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကို ဖြည့်မပေးနိုင်တော့ သူမလည်း စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ချင်လည်း နေပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူမရင်ထဲမှာလည်း စိတ်ညစ်နေရပါတယ်။
“ယောကျ်ားတွေက အတင်းရော အဓမ္မရော မလုပ်ပေးရင်ပဲ ဖာတန်းပဲသွားတော့မယ်လိုလို ဖြစ်နေတာ စိတ်ထဲမှာလည်း နေလို့မပျော်ဘူး ဟိုးတွေးဒီတွေးနဲ့ စိတ်ညစ်တာပေါ့”
အိမ်ထောင်သက် ၉ နှစ်ထဲမှာရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့ သူမအတွက် “မပေါင်းရခက် ပေါင်းရခက်နဲ့ ကလေးတွေမျက်နှာကြည့်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲခံပြီး ပေါင်းနေရပါတာ” ဟု မနှင်းဖြူရဲ့ ငိုရှိုက်သံက ဆူညံနေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခေတ္တလွှမ်းမိုးသွားပါတယ်။
သူမရဲ့ ယောကျ်ားအကြောင်း သိခါစမှာတင် ကွာရှင်းပေးဖို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမကို ကွာမပေးဘူးဆိုတော့ သူမမကြိုက်တာကို မလုပ်တော့ဘူးထင်ခဲ့တယ်။ သူကတော့ မထိခလုတ် ထိခလုတ်တွေပြောပြီး ပိုတောင် ဆိုးလာပါတယ်။
တရက်တော့ သူမအပြင်သွားတဲ့အခါ ဆယ်လအရွယ် သမီးလေးအတွက် ဆိုင်ကယ်စီးရန် အန္တရာယ်များတဲ့အတွက် ယဉ်ထိန်းရဲတွေလည်း ဖမ်းမှာစိုးတဲ့အတွက် ကလေးကို သူ့အဖေနဲ့ ချန်ထားခဲ့တယ်။ ကလေးဖြစ်တော့ မအေနောက်မလိုက်ရလို့ ငိုတာပေါ့။ သူမလည်း စိတ်ချလက်ချထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။
သူမပြန်လာတော့ မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက သူမကို တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ သမီးလေးရဲ့ အနာဂတ်ကိုလည်း တွေးပြီး ရင်လေးမိသွားတယ်။ ဘာကြောင့် အဖေဖြစ်သူက အဲလိုလုပ်ရတာလဲ သူမနားမလည်နိုင်ဘူး။ “သူက ကလေးတအားငိုလို့ ထမကြည့်နိုင်လို့ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ယောက်ျားတန်ဆာကိုပေးကိုင်ထားတာ သမီးလေးကကိုင်ပြီး ဆော့ပြီးငိုတိတ်သွားတာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့အဲလိုလုပ်ရတာလဲလို့မေးတော့ ကလေးတအားငိုနေလို့ ငါလည်းမထနိုင်တာနဲ့ အဲလိုပဲပေးကိုင်လိုက်တာတဲ့” လို့ သူမကပြောပြပါတယ်။
တကယ်လို့ ကလေးက လူကြားထဲမှာငိုလို့ အဲဒီလိုလိုက်ကိုင်နေရင် သူမတို့ အရှက်မကွဲရမှာပေါ့။ ဘာလို့ အဲလိုလုပ်ရတာလဲလို့ သူမမေးတော့ “ကလေးပဲနောက်ကျရင် သူမေ့သွားမှာပေါ့ အဲလိုပြောတယ် သူအဲလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ ကျမအနေနဲ့ စဉ်းစားရပြီ ကလေးကြီးလာရင် သူလည်းအရက်မူးလာရင် ကလေးကိုမပြဘူး မပေးကိုင်ဘူးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ကျမမယုံတော့ဘူးလေ ကျမကွယ်ရာမှာ ကလေးကို စိတ်မချရတော့ဘူးဖြစ်နေပြီလေ စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့ပေါ့ အပြင်သွားလည်း စိတ်မချရဘူး ဟိုနားဒီနားသွားလည်း စိတ်မချရဘူး” လို့ သူမအတွက် ဘယ်နေရာသွားသွား နောက်ဆံတင်းနေရတဲ့ အဖြစ်နဲ့ ကြုံနေရကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဖေက ကလေးရှေ့မရှောင် မကောင်းတဲ့နိုင်ငံခြားကားတွေ ကြည့်တော့ ကလေးရဲ့ အကျင့်စရိုက်လည်း ပျက်ပြားလာတယ်။ ကျောင်းဆရာမကလည်း သူမကိုခေါ်တွေ့တယ်။ “နင်တို့ကလေးတွေကို အဲလိုဇာတ်ကားမပြနဲ့ ကလေးကလေးချင်း ဒီကျောင်းမှာ အဲလိုလိုက်လုပ်တဲ့အကျင့်တွေ ဖြစ်နေတယ် ရှိနေတယ်” ဆိုတဲ့အခါကျတော့ သူမအရမ်းရှက်တယ်။
“ကျောင်းစာရေးထဲမှာ ကျမညီမဝမ်းကွဲရှိတော့ သူကလည်း ကျမကို နင်တို့လည်း အသက်အရွယ်တွေရလာပြီပဲ ကလေးတွေရှေ့အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ပေ့ါ လို့ခေါ်ပြောတယ် ကျမတအားနဲ့ရှက်တယ်။” လို့လည်း သူမကပြောပြပါတယ်။ အဖေဖြစ်သူက လုပ်တဲ့အပြစ်က သူမတို့ သားအမိတွေအပေါ် သက်ရောက်သွားတယ်။ အထင်မှားခံရတဲ့ သူမမှာ ကြံရာမရဖြစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ သူမ လုံးဝကွဲဖို့အတွက် စဉ်းစားပြီး ဥက္ကဌကို သွားပြောပြတော့ သူမကို ပြန်စဉ်းစားပါဦးတဲ့။ ကဲ….သူမခံစားရတာကို သူမပဲသိတယ်။ လူကြီးတွေက သူမယောကျ်ားရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို မသိလို့ ပြန်စဉ်းစားခိုင်းတယ်။ သူမကပြောပြမှ လူကြီးတွေလည်းသိမှာ၊ ဒါပေမဲ့ သူမက “ကျမအဲလိုမျိုးလည်း ကိုယ့်ယောကျာ်းကြောင်းလည်း အတင်းမပြောချင်ဘူး ကွယ်ရာမှာပြောရင်လည်း သူလည်းသိက္ခာကျမှာ ကျမလည်းသိက္ခာကျမှာ ကျမမလုပ်ချင်ဘူး ကျမရှက်လွန်းလို့ ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာ မနေချင်ဘူး ရောင်းပြီးပြောင်းမယ်လို့ သူ့ကိုကျမပြောတယ် မပြောင်းဘူးတဲ့” လို့ သူမကပြောပြပါတယ်။
အိမ်ရှေ့က မိန်းမလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် စကားတွေပြောတယ်။ သူမက ငိုပြီး “ကျမမေးတာကို မင်းသိဖို့မလိုဘူးတဲ့ ကျမတအားစိတ်ထိခိုက်တယ် ကလေးတွေ မျက်နှာကြည့်ရင်း သူပြင်မလားနဲ့ ကျမစောင့်နေခဲ့တယ်”
“ကျမအရင်တုန်းက ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တုန်းကလည်း စာမတတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ လက်လျှော့ခဲ့ရတယ် အခုအိမ်ထောင်ကျတော့လည်း ပေးမရောင်းဘူး ကျမက စက်ချုပ်ဝါသနာပါတယ် အထည်ချုပ်ချင်လို့ စက်တစ်လုံးလောက်ဝယ်ပေးပါပြောလည်း မဝယ်ပေးဘူး ဘာလုပ်ဖို့လည်း ငါရှာကျွေးနေတာ လို့ပဲပြောတာ သူရှာကျွေးတယ်ဆိုပြီး ကိုင်ပေါက်ခဲ့တာ” လို့လည်း သူမက ပြောပြပါတယ်။
သူမက စာမတတ်လို့ အနှိမ်ခံရကြောင်းကိုလည်း “ကလေးကို စာသင်ပေးရင်တောင်မှ သူက မင်းစာပြမနေနဲ့ စာလည်းမတတ်ဘဲနဲ့ ကျူရှင်ထားပေးပြီးပြီပဲ ပြမနေနဲ့ သူနဲ့ကျမှကျမအနှိမ်ခံနေရတယ် အိမ်ဖော်လုပ်တုန်းက ဈေးရောင်းတုန်းက ပိုင်ရှင်က ကျမကို နာမည်လေးရေးတတ်အောင် ဂဏန်းတွေပေါင်းတတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တာ ကျမအဲဒါလောက်တတ်တယ် ကျမကို သူနှိမ်တယ်။ သူကတော့ ၈ တန်းအထိတက်ခဲ့တာပေါ့” လို့ ပြောတယ်။ သူမကတော့ မိခင်တစ်ယောက်အဖြစ် သားသမီးတွေကို ကိုယ်သိသလောက် သင်ကြား ဆုံးမချင်တာကိုလည်း အပြစ်ပြောခံနေရတယ်။ သူမဘာပြန်ပြောနိုင်မှာလဲ? စာမတတ်တဲ့ သူမ ချောင်မှာထိုးပြီး ငိုရုံကလွဲရင် ဘာမတတ်နိုင်ဘူးလေ။
အသက်ကြီးပေမဲ့ မပျက်စီးသေးဘူးဆိုတဲ့အတိုင်း အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ တွဲသွားတွဲလာ လုပ်ပြတာတွေရှိလာတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ သူမတို့ လင်မယားစစနောက်နောက်နဲ့ အခုတော့ သူမစလိုက်ရင်လည်း မကြိုက်တော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ သူမခပ်တည်တည်နေပြန်ရင်လည်း မကြိုက်ပြန်ဘူး။ သူမမှာ ဘယ်လိုနေနေအပြောခံနေရတော့ စိတ်ညစ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကလေးတွေကို အပြစ်မရှိဘဲနဲ့ ရိုက်ခဲ့မိတယ်။
ဒါ့အပြင် သူမယောက်ျား ဖောက်ပြားနေတာကိုလည်း “သူဖာသည်မတွေနဲ့နေတာကို ကျမပြောတော့ သူက ကျမပါးကို ရိုက်တယ် ဆေးဆယ်ရက်လောက် လိမ်းယူရတယ်။ တော်တို့က ဆီးများလို့ အပေါက်ရှာပြီး မိန်းမကိုအပြစ်လိုက်ရှာတယ်လို့ ကျမပြောတယ်။ ကျမအစ်မတွေကိုလည်း ပစ်မှားတယ်။ ကျမနဲ့အပြင် အစ်မတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ပေါင်းမယ်လို့ သူပြောတယ်” လို့ ပြောပြပါတယ်။ သူမဘယ်လိုရင်ဆိုင် ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကလေးတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း သူမ ကျိတ်ငိုနေရတယ်။
ဆက်ပြီး သူမက “ကျမနဲ့အိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ချော့မော့ရင်တစ်မျိုးပေါ့ အခုက အော်ငေါက်ပြီး ဆက်ဆံတော့ ဘယ်သူက စိတ်ပါတော့မှာလဲ။” လို့ ပြောပါတယ်။
စာမတတ်တဲ့ သူမ၊ အသိညာဏ်မကြွယ်ဝတဲ့ သူမကတော့ ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီး အဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့ တောထဲမှာ သွားနေရင် ကောင်းမလား ဒါမှမဟုတ် ကလေးတွေနဲ့အတူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေလိုက်ရင် ကောင်းမလားဆိုပြီး အမျိုးမျိုးစဉ်းစားမိတယ်။
အစ်မဖြစ်သူ မအေးဖြူကလည်း မနှင်းဖြူအကြောင်းကို သိရတာ တစ်ပတ်သာသာပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါတောင်မှ ညီမဖြစ်သူ မနှင်းဖြူမခံစားနိုင်တော့လို့ ပြောပြမှ သိရတယ်။ ယခုလည်း သူမနဲ့အတူ ရှေ့နေရုံးသို့လာပြီး တရားရုံးမှာ ကွာရှင်းစာတင်ဖို့အတွက် လုပ်နေပါတယ်။
“ကျမလည်း ကျမညီမပြောပြမှ သိရတယ် သူ့ယောက်ျားကို အစကကောင်းတယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ် ညီမလေးကို သူဌေးတစ်ယောက်က လာတင်တောင်းတယ် ဒါပေမဲ့ ကျမညီမက စာမတတ်တာကို အနှိမ်ခံရမှာစိုးပြီး လက်မခံခဲ့ဘူး အခုသူကွာရှင်းချင်တယ်ပြောတော့ ကျမလည်း သူ့ကို ကူညီပေးတယ် သူလည်းကွာရှင်းချင်မှ ကျမလည်း ကူညီလို့ရတာလေ” လို့ မအေးဖြူက ပြောပြပါတယ်။
ထို့ပြင် ပြဿနာက မအေးဖြူရောက်လာမှ ဖြစ်လာတာကို ထင်နေမိခဲ့တာကိုလည်း သူမက “ကျမရောက်မှ ဖြစ်တာထင်နေတာ သူ့ယောက်ျားက ကျမက ဘာမှမသိဘူး သူပြောပြမှသိတာ ကိုယ်ပေါင်းတာပဲ ကောင်းမကောင်းကိုယ်ပိုသိမှာပေါ့ စဉ်းစားပေါ့”.. လို့ မအေးဖြူကပြောပါသည်။ ဘယ်လိုပဲ မနှင်းဖြူဆုံးဖြတ်ပါစေ အစ်မဖြစ်တဲ့ မအေးဖြူကတော့ လက်ခံပြီး ကူညီပေးနေမှာပါ။
ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်တွေမှာ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသော အထက်တန်းရှေ့နေ ဒေါ်မိုးမိုးသက်အောင် က ထိုအမှုကို လိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်မိုးမိုးသက်အောင်သည် Law Hom (Law Firm) အဖွဲ့မှ အခမဲ့ရှေ့နေလိုက်ပေးသော အမျိုးသမီးရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Law Home (Law Firm) အဖွဲ့မှ မိခင်နဲ့ကလေးအမှုတွေကို အဓိကထားပြီး အမှုလိုက်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။
သူမက “ဒီခေတ်စ်က အမျိုးသမီးရေးရာကနေပြီးတော့မှ ဆက်သွယ်လာတယ် အသိအမတစ်ယောက်ကပေါ့နော် ကျမတို့အဖွဲ့က တကယ်နစ်နာနေတဲ့သူတွေအတွက် အခမဲ့လိုက်ပေးတယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
ထိုအမှုအမျိုးအစားကြောင်းကိုလည်း သူမက “သူ့ယောကျ်ားက ပြောမယ်ဆိုရင် ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူကြီးလူကောင်းလိုနေတယ်ပေါ့ သူ့အမျိုးသမီးကိုကျတော့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာတွေမှာ လွန်လွန်ကျူးကျူးဆက်ဆံခိုင်းတာတွေပေါ့နော် အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအနေနဲ့က အဲလိုမျိုးတွေ ဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး သူ့အမျိုးသားက နိုင်ငံခြားခွေတွေကြည့်ပြီး အဲလိုမျိုးတွေ ဆက်ဆံခိုင်းတာပေါ့ အမြဲတမ်း သူ့စိတ်နှလုံး ပင်ပန်းခဲ့ရတယ်” လို့ သူမကြုံတွေ့ရတာကို ပြောပြပါတယ်။
အမှုလာတိုင်ချိန်တွင် သူမက “ကျမကို လာတွေ့တဲ့နေ့က သူ့သားလေးပါတယ် ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ် သားက နှစ်တန်းရောက်နေပြီး အဲ့နေ့က ကျောင်းအုပ်ဆရာမက ခေါ်တွေ့တယ် အဲမှာ သူအရမ်းပေါက်ကွဲပြီးတော့ ကွာရှင်းဖို့အထိ ဆုံးဖြတ်ပြီး လာတွေ့တာပေါ့ သူ့သားလေးလည်းပါတော့ ကျမသူ့သားလေးကို မေးကြည့်တယ် ဟုတ်တယ်တဲ့ အဖေကအဲလိုတွေကြည့်တယ်ပေါ့ ပြောပြတယ် နောက်ဆက်မလုပ်ဖို့ ကလေးကိုပြောတာပေါ့ သူ့အမေကတော့ ငိုနေတာပေါ့ သူ့ယောကျ်ားက ကွာမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် သူ့ဘက်က တရားရုံးအထိတက်ရင်လည်း တက်မှာပေါ့” လို့ ပြောပြပါတယ်။
ထို့ပြင် ဒေါ်မိုးမိုးသက်အောင်က “အဖေက နိုင်ငံခြားကားတွေကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ သားကရှိနေတယ် သူကတော့ တောင်းပန်တာပေါ့နော် ပြီးတော့ ကလေးက ကျောင်းမှာဆိုရင် အပြုအမူတွေက အရမ်းနဲ့ဆိုးတယ် ဆရာမတွေက ခေါ်ပြောတဲ့အခါမှာ သူသိက္ခလည်းကျ ငိုပါတယ် ကျမရှေ့မှာ ပြီးတော့မှ သူလုံးဝမပေါင်းသင်းနိုင်တော့ဘူး ကလေးတွေအတွက်လည်း အနာဂတ်ပျက်ဆီးတယ် ဒါပေမဲ့တစ်သက်လုံး သူ့ယောကျ်ားလုပ်စာပဲထိုင်စားလာတာဆိုတော့ ဝင်ငွေဘယ်ရှိပါ့မလဲ” လို့ သူမက ပြောပြပါတယ်။
မနှင်းဖြူရဲ့ယောကျ်ားက မကွာရှင်းပေးနိုင်သောအခါ ရှေ့နေဒေါ်မိုးမိုးသက်အောင်နဲ့ ပြန်လာတိုင်ပင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး မနှင်းဖြူက ကလေးတွေကို မိဘမဲ့ဂေဟာကျောင်းမှာ ထားပြီး သူမကတော့ဈေးရောင်းပြီး ပိုက်ဆံရှာမယ်။ အဲလောက်ထိ သူမစဉ်းစားထားကြောင်းကိုလည်း ဒေါ်မိုးမိုးသက်အောင်က ပြောပါတယ်။
နောက်တော့ ဒေါ်မိုးမိုးသက်အောင်က “သူ့ယောက်ျားကိုခေါ်တယ် Law Home ရုံးကိုလာတယ် ရပ်ကွက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုခေါ်ပြီး သူ့ယောကျ်ားကို ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းလိုက်တယ် ထိုးပေးသွားတယ် အဲလူက စာချုပ်ထဲမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့ တစ်သက်လုံး အမျိုးသမီးကို ကာယိအိန္ဒြေမပျက်ပြားစေမှုရယ် ကလေးတွေအတွက်ရယ်ပေါ့ သူဝန်လည်းဝန်ခံတယ် တကယ်လို့ အဲလိုတွေ ထပ်ပြုမူမယ်ဆိုရင် လင်မယားကွာရှင်းခွင့်ပြုပြီးတော့ ရှိသမျှပစ္စည်းတွေ အိမ်တွေဘာတွေကအစ အမျိုးသမီးကို ပေးရမယ်၊ အမျိုးသမီးဘက်က ကာကွယ်ပြီးတော့ စာချုပ်ချုပ်ပေးလိုက်တယ်”
စာချုပ်ပါအရ မနှင်းဖြူအတွက် မည်မျှလုံခြုံစိတ်ချရမှုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဒေါ်မိုးမိုးသက်အောင်က “အများကြီးလုံခြုံမှုရှိသွားတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီရဲ့ခံဝန်စာချုပ်လေးကို အသေးစိတ်ကျမတို့ ထည့်ရေးထားတယ် သူ့ကိုလည်း နောက်နောင် ဒီလိုမပြုမူဘူးပေါ့။ တကယ်လို့ သူဒီစာချုပ်ကို ဖောက်ဖျက်ရင် ကျမတို့က ဥပဒေအရ ထပ်အရေးယူလို့ရတယ်လေ နောက်ပြီး ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ ကလေးဥပဒေအရ အရေးယူလို့ရတယ် သူ့ယောကျ်ားကိုလည်း ပြင်ဆင်ချင်တာ၊ ငြင်းပယ်ချင်တာရှိလားမေးတယ် သူ့ယောကျ်ားက မရှိဘူး လက်ခံခဲ့တယ်”
ယခုကဲ့သို့အမှုမျိုးကို လာရောက်တိုင်ကြားတာ သူမအနေနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဒေါ်မိုးမိုးသက်အောင်က ပြောပါတယ်။
ယခုကဲ့သို့အမှုမျိုး ကျူးလွန်ပါက အောက်ပါအတိုင်း ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အပြစ်ပေးနိုင်ကြောင်းကိုလည်း Law Home (Law Firm) အဖွဲ့မှ ရှေ့နေဦးကျော်ဝဏ္ဏအောင်က ပြောပါတယ်။
(၁) ထိုဖြစ်ရပ်အားလေ့လာကြည့်လျှင် …. ပြစ်မှုဆိုင်ရာ (ရာဇာသတ်ကြီး) ဥပဒေ အရ …
ပုဒ်မ ၃၇၇။ ။ ယောကျာၤးနှင့် ဖြစ်စေ၊ မိန်းမနှင့် ဖြစ်စေ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့် ဖြစ်စေ မည်သူမဆို မိမိ အလိုအလျောက် ဓမ္မတာနှင့် ဆန့်ကျင်သော ကာမစပ်ယှက်မှုကို ပြုလျှင် ထိုသူကို တစ်သက်တစ်ကျွန်းဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဆယ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ် တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည့်ပြင်၊ ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ယောကျာၤးလေးအချင်းချင်း၊ ယောကျာၤးနှင့် တိရိစ္ဆာန်၊ မိန်းမနှင့် တိရိစ္ဆာန် ကာမယှက်စပ်မှု သာမက ယောကျာၤးနှင့် မိန်းမ ကာမယှက်စပ်ရာတွင် ဓမ္မတာနှင့် ဆန့်ကျင်၍ ကျင်ကြီးစွန့်ရာ လမ်းကြောင်း(စအို) ၌ ကာမယှက်စပ်ခြင်းနှင့် ပါးစပ်ထဲသို့ ထည့်၍ သွားလာလျှင်လည်း ဓမ္မတာနှင့် ဆန့်ကျင်၍ ပြစ်မှုမြောက်သည်။
– လင်မယားချင်းဖြစ်စေ၊ အကျင့်ခံရသူက အလိုတူသည် မတူသည် ဆိုခြင်းကို လုံး၀ စဉ်းစားရန်မလိုသည့် ပြစ်မှု ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် မုဒိမ်းမှုကဲ့သို့ပင် ပြုသူ၏ အင်္ဂါဇတ်သည် အပြုခံရသူ၏ အင်္ဂါဇတ်ထဲသို့ဝင်မိရန် လိုသည်။
– ရဲအရေးပိုင်သော အမှုဖြစ်သည်။ ကနဦးကပင် ဝရမ်းထုတ်ပေး နိုင်သည်။ အာမခံမပေးနိုင်၊ ကျေအေးခွင့်မရှိ၊ စက်ရှင်ရုံး၊ ပထမတန်းအာဏာရ ပြစ်မှု တရားသူကြီးတို့ စစ်ဆေးစီရင်နိုင်သည်။ ယခုအခါ ပြည်နယ်တိုင်းနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများ စီရင်ခွင့်ရှိသည်။
(၂) ထိုဖြစ်ရပ်တွင် လင်မယား လည်းဖြစ်သည့်အတွက်… အိမ်ထောင်ရေး ရှုထောင့်အရကြည့်လျှင်…..
အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှု (၂) မျိုး
– (က) သာမန်အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှု ၊ (ခ) ကြီးလေးသောအိမ်ထောင်ရေး ပြစ်မှု။
(က) သာမန်အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှု (၅) မျိုး
(၁) ရက်စက်မှု (၂) လင်၏ဖောက်ပြန်မှု (၃) ဒုတိယမယားယူမှု (၄) စွန့်ပစ်မှု (၅) လီဆယ်မှု
(ခ) ကြီးလေးသော အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှု (၂) မျိုး
(၁) မယား၏ ဖောက်ပြန်မှု (၂) ကြီးလေးသော ရက်စက်မှု
– ဖော်ပြပါ အိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုများနှင့် အကျုံးဝင်ပါက လင်ဖြစ်စေ၊ မယားဖြစ်စေ ကွာရှင်းနိုင်သည်။
– ကြီးလေးသောအိမ်ထောင်ရေးပြစ်မှုရှိ ကြီးလေးသော ရက်စက်မှုသည် ဒဏ်ရာမှာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ-၃၂၀ ၌ ပြဆိုသည့် အပြင်းအထန်နာကျင်စေမှု ဖြစ်လျှင်သော်လည်းကောင်း ရက်စက်မှုသည် ကြီးလေး လာပြီး လင်မယား ကွာရှင်းရာတွင် ပြစ်မှုကျုးလွန်သူသည် ပါရင်းပစ္စည်း အပါအဝင် နှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းရှိ ၎င်း၏ အစု ဆုံးရှုံးခြင်း ခံရမည်။
(၃) ထိုဖြစ်ရပ်သည် ကလေးသူငယ်နှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည့်အတွက်….
(က) ကလးသူငယ် ဥပဒေ ပုဒ်မ – ၆၅ (က) အရ ကလေးသူငယ်အား အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင် သော (သို့မဟုတ်) ရောဂါဝေဒနာစွဲကပ်စေနိုင်သော (သို့မဟုတ်) အကျင့်စာရိတ္တကို ပျက်ပြားစေနိုင်သော အလုပ်ကိုခိုင်းစေခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြုလုပ်ခွင့်ပေးခြင်း အစရှိသည်များ ကျူးလွန်လျှင် ထောင်ဒဏ်(၆)လထိ၊ ငွေဒဏ်၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးလည်းချမှတ်နိုင်သည်။
(ခ) ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ – ၂၉၃ အရ ကလေးသူငယ် (သို့မဟုတ်) အသက် (၂၀) နှစ် မပြည့်သေးသူကို ညစ်ညမ်းသည့် စာပေ၊ ရုပ်ပုံ/ရုပ်ရှင် ငှားခြင်း၊ ပြသခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဖြန့်ချီခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) ထိုသို့ပြုရန် ကမ်းလှမ်းခြင်း၊ အားထုတ်ခြင်း အစရှိသည်များ ကျူးလွန်လျှင် ထောင်ဒဏ် (၆) လထိ၊ငွေဒဏ်၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် လုံးလည်းချမှတ်နိုင်သည်။
မည်သို့ဆိုစေ မနှင်းဖြူရဲ့ယောကျာ်းက ဒီစာချုပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူမှု ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး မနှင်းဖြူအတွက်လည်း နစ်နာမှုမရှိအောင် ချုပ်ဆိုပေးထားကြောင်းကို ဒေါ်မိုးမိုးသက်အောင်က ပြောပါတယ်။
တရားရုံး ရောက်ခဲ့ပေမယ့် လည်း…